Loop & Tie: ny B2B Outreach Gifting dia fampiharana ho an'ny mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny AppExchange | Martech Zone
Zoma, Martsa 26, 2021 Zoma, Martsa 26, 2021 Douglas Karr
Lesona iray izay ampianariko ny olona amin'ny marketing amin'ny B2B hatrany dia ny mbola hividianana manokana, na dia miara-miasa amin'ny fikambanana lehibe aza. Ireo mpanapa-kevitra dia miahiahy momba ny asany, ny haavon'ny adin-tsaina, ny habetsahan'ny asany, ary na dia ny fifaliany isan'andro amin'ny asany aza. Amin'ny maha serivisy B2B na mpanome vokatra anao, ny traikefa hiara-miasa amin'ny orinasanao dia matetika mihoatra ny tena fitaterana azy.
Raha vao nanomboka ny orinasako aho dia talanjona tamin'izany. Nampifantoka ny saiko fotsiny tamin'ireo entana natolotra aho mba hahafahako manome orinasa hanatsarana azy. Matetika aho no taitra rehefa nilaza ny mpanjifa fa nandeha haingana loatra isika na nanao fanovana be loatra. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nijery ny fomba ahafahako manome lanja ny fikambanan'izy ireo ivelan'ny fanaterana ny filazanay momba ny asa. Ny faritra iray dia fanomezana… fampatsiahivana fotsiny ny fankasitrahana mba hanamaivana ny androny.
Ny sasany namboarina manokana, ny hafa mifandraika amin'ny orinasa. Rehefa nifindra tamina toerana vaovao tsara tarehy ny iray tamin'ny mpanjifako dia nividy mpanamboatra kafe tokana natokana ho azy ireo aho. Rehefa nandefa podcast ny iray hafa tamin'ny mpanjifako dia novidiko fakan-tsary mivantana izy ireo. Ho an'ny iray hafa, nividy tapakila ho an'ny hetsika asa soa izay nitenenan'ilay mpanazatra NFL teo an-toerana aho. Rehefa nanana ny zanany voalohany ny mpanjifa iray dia nividy zavatra tsara tao amin'ny lisitry ny faniriany aho.
Ny fanomezana dia fomba tsara hanovana ny traikefan'ny mpampiasa, saingy tsy maintsy vitaina tsara. Rehefa niasa tamin'ny gazety isam-paritra aho dia nijery ny sampan'ny dokambarotra namoaka tapakila teo an-tokotanin'ny dokambarotra lehibe. Tsy a fanomezana, nitombo ka nanjary antenaina. Natao manokana ny fanomezana ary afaka manova ny fifandraisana.
Misokatra sy manao ny marina ihany koa aho amin'ny mpanjifa rehefa misaotra ahy izy ireo fa, tamin'ny farany, dia nandoa ilay fanomezana tamin'ny alàlan'ny fotoana nomen'izy ireo ahy.
Loop & Tie dia sehatra fandraisana andraikitra izay manampy ny orinasa hifandray amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny kanto fanomezana. Ny sehatra fifanakalozana mifototra amin'ny safidy dia mandefa fahasambarana sy fahatsapana fankasitrahana izay tena ilaina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa maharitra. Tena nanadihady ny mpanorina azy ireo aho, Sara Rodell, ao amin'ny podcast anay.
Nanomboka tamin'ny 2011, Loop & Tie dia nanova ny fomba fisainan'ny orinasa momba ny fanomezana. Manelingelina ny indostrian'ny fifanakalozana orinasa $ 125B, ny sehatra fanomezana fanomezana mifototra amin'ny safidy dia mamela ny orinasa hisolo ny fomba fanao daty amin'ny fandefasana fanomezana mitovy amin'ny iray habe amin'ny rehetra.
Fa kosa, ny mpandefa dia mamorona fanangonana fanomezana voatahiry miaraka amin'ireo entana avy amina orinasa kely 500 mahery. Avy eo ireo mpandray dia misafidy ny zavatra tiany indrindra na misafidy ny hanome ny lanjan'izany ho an'ny fiantrana, ka mahatonga ny fifanakalozana fanomezana ho loharanom-baovao sy fifandraisana vaovao.
Tsidiho ny Loop & Tie
Loop & Tie Salesforce App amin'ny AppExchange
Loop & Tie dia nandefa fampiharana vaovao ho an'ny Salesforce. Miaraka amin'ny sehatra fanomezana fanomezana ny mpanjifa Loop & Tie, ny mpampiasa dia afaka mandefa fanomezana iray na 10,000 ao anatin'ny minitra vitsy monja. Azo alaina ao amin'ny AppExchange izao, azon'ireo mpampiasa atao ny mametraka ny rindranasa ao anatin'ny ohatra Salesforce azy ireo ary manomboka mandefa fanomezana amin'ny mpanjifa sy mpanjifa eo noho eo.
Ao amin'ny Loop & Tie, tsy mitsahatra ny mieritreritra fomba ahafahanay mampiasa ny herin'ny teknolojia hanampiana olona maro hifandray. Ny fisintomana tsapantsika hahafantatra sy hifety amin'ny alàlan'ny fanomezana dia fahatsapana tsara tarehy sy maharitra. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mpampiasa Salesforce ny fahaizana mandefa fanomezana mivantana avy amin'ny fampiharana azy ireo, dia afaka manome hery haingana kokoa ny traikefa momba ny fanomezana olona ho an'ny orinasa izahay.
Sara Rodell, mpanorina sy CEO an'ny Loop & Tie
Ireo mpampiasa Loop & Tie izay liana amin'ny famatorana ny CRM amin'ny fifanakalozana mifototra amin'ny fifampiraharahana dia afaka miantehitra amin'ny Salesforce ankehitriny ho toy ny toeram-ponenany hanarahana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny fivezivezena. Amin'ny alàlan'ny fampidirana fanomezana ho toy ny fitaovana fampidirana ao anatin'ny tontolon'ny Salesforce, Loop & Tie dia manampy ny mpampiasa hanatsara ny fanentanan'ny mpanjifany amin'ny fifanakalozana azo tsapain-tanana.
Ny sehatra fanomezana Loop & Tie dia mamorona traikefa mpanjifa misy dikany izay mamaritra ny filan'ny orinasa ilaina amin'ny fanitsiana sy ny fanarahan-dia. Ny fananganana ao anatin'ny Salesforce dia manampy ireo orinasa hanolotra fikitihana feno fieritreretana izay vato fehizoro amin'ny fifandraisana matanjaka, ao anatin'ny rafitra azo zahana rehetra izay manampy ny mpanjifa handrefesana ny ROI amin'ny programa fanomezana azy ireo.
Loop & Tie dia manome traikefa ho an'ny mpanjifa manokana izay manangana fifandraisana maharitra ary ny ekipa angon-drakitra dia mila mahatakatra ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra, izany rehetra izany dia eo amin'ny sehatra iray mahatsapa ny fiaraha-monina izay, amin'ny alàlan'ny fanomezana, dia manohana vondrom-piarahamonina manana mpamatsy orinasa kely.
Jereo ny Loop & Tie amin'ny AppExchange
Tags: appexchangefanomezana b2bfanentanana ny mpanjifaCRMfanentanana ny mpanjifafandaharana fanomezanafanomezanapaikady fanomezanaloop & mamatotraloop ary afatoryfanentananasalesforceSara rodell